7 तरीका टेक्नोलोजी तपाईंको ब्रांड नष्ट गर्न सक्छ Martech Zone
W तरिका टेक्नोलोजी तपाईंको ब्रांड नष्ट गर्न सक्दछ
शुक्रबार, अगस्त 23, 2019 बिहीबार, अप्रिल 1, 2021 Douglas Karr
यस हप्ता, म एक ग्लोबल ब्रान्डको लागि डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाला गर्दै साइटमा थिएँ। कार्यशालालाई म द्वारा सहयोग र सह-विकास गरीएको थियो बटलर विश्वविद्यालय र अद्भुत शिक्षक जुन संगठन भित्र पूर्ण-समय हो।
जब हामी मञ्चको मार्टेक स्ट्याक सेक्सनमा आइपुगेका थियौं कि कमर्चारीहरुलाई संगठन भित्रको टेक्नोलोजी सम्बन्धी संसाधनहरुमा शिक्षित गर्न, म प्लेटफर्मको संयोजनमा मारिएँ। यो तपाइँको सामान्य मार्टेक शीर्ष-दायाँ क्वाड्रन्ट, उद्यम प्लेटफर्मको स्ट्याक जस्तो देखा पर्दैन। यो विश्व-स्तरीय, खुला स्रोत प्लेटफर्म, साना अनुप्रयोगहरू, र आउटसोर्स एजेन्सी पार्टनरहरूको संयोजन थियो।
कम्पनीले उनीहरूको मार्टेक स्ट्याक उद्देश्यपूर्ण रूपमा निर्माण गरे यो सुनिश्चित गर्नका लागि सही सन्देश सही ग्राहकमा सही समयमा पुग्न सकिन्छ। सबै टुक्राहरू त्यहाँ र ठाँउमा छन्… केहि सिमलेस एकीकृत र अरूलाई म्यान्युअल प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्दछ ... तर प्रत्येक सावधानीपूर्वक अनुपालन मुद्दाहरू, सुरक्षा चिन्ताहरू, र समग्र विपणन आवश्यकताहरूमा अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित गर्न चयन गरियो।
कार्यशाला भित्र, मार्टेक स्ट्याक प्रस्तुत गरियो अन्तिम कर्मचारीहरु लाई। र, रणनीतिक रूपमा, प्रत्येक प्लेटफर्मको क्षमताहरू के थिए वा कसरी प्रयोग गरियो भनेर धेरै जानकारी प्रस्तुत भएन।
किनभने कम्पनीको मार्केटिंग नेतृत्व आफ्नो बिक्री, विज्ञापन, मार्केटिंग, र ग्राहक अनुभव टीमहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहान्थे ग्राहक अनुभव, र त्यसपछि त्यो अनुभव प्रदान गर्न प्रविधि प्रयोग गर्न। कुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक थिएन सकेजति टेक्नोलोजीका साथ सम्पन्न होस् ... तर के गर्नु पर्छ त्यसमा केन्द्रित गर्न यस टेक्नोलोजीको अस्तित्व छ वा छैन। उनीहरूले स्वीकार गर्छन् कि त्यहाँ स्ट्याकको टुक्राहरू छन् जुन सुविधाहरूका लागि पनि प्रयोग गरिदैन जुन तिनीहरू सामान्य रूपमा चिनिन्छन्।
कम्पनीले एक एक्रोनिम प्रयोग गर्‍यो, पोस्ट, यसको डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियाका लागि:
मान्छे - प्रयासको लक्षित दर्शकहरु को पहिचान गर्नुहोस्।
उद्देश्य - परिभाषित गर्नुहोस् कि उद्देश्य र परिणामहरू के तिनीहरूले मार्केटिंग प्रयासको साथ प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्।
रणनीति - च्यानलहरू, माध्यमहरू, मिडिया र परिभाषित गर्नुहोस् ती उद्देश्यहरूमा पुग्न लक्ष्यको लागि तैनाती गर्न।
प्रविधि - त्यो प्रविधिको पहिचान गर्नुहोस् जसले मानिसहरूलाई अनुसन्धान गर्न, उद्देश्यहरू मापन गर्न र रणनीति विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
के टेक्नोलोजी तपाईंको ब्रान्डमा चोट पुर्‍याइरहेको छ?
टेक्नोलोजीले यो ग्राहकको ब्रान्डलाई हानी पुर्याइरहेको छैन किनकि उनीहरूले यसलाई उचित प्राथमिकता दिएका छन्। प्रक्रियाहरू, समस्याहरू, बजेटहरू, संसाधनहरू, प्रशिक्षण, सुरक्षा, र पालना सबै ध्यानपूर्वक समीक्षा गरियो पहिले प्रविधि छनौट गरिएको छ। टेक्नोलोजी देखिएको छैन as समाधान, यसलाई कुशलता र प्रभावकारी ढ seen्गले समाधान पुर्‍याउने उपकरणको रूपमा देखिएको छ।
तर त्यो म प्रत्येक कम्पनीको साथ देख्दिन। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन म टेक्नोलोजीमा देख्दैछु केही ब्रान्डको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्छ।
Apps - उपभोक्ताहरू कुनै पनि अधिक व्यवसायको साथ अन्तर्क्रिया गर्न चाहँदैनन्। एउटा उदाहरण वित्तीय उद्योग हो। उपभोक्ताहरू एक वित्तीय सल्लाहकार, बैंक, वा बीमा दलाल संग कुरा गर्न चाहँदैनन् ... तिनीहरू केवल एक महान् अनुप्रयोग चाहान्छन् जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ र सबै सुविधाहरू तिनीहरूलाई आवश्यक छ। जबकि अनुप्रयोगहरू एक पूर्ण आवश्यकता हो, यो महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यसले तपाईंको ब्रान्डको साथ कुनै मानवीय सम्बन्ध तोड्यो। तपाईंको कम्पनीले उनीहरूको मागको माध्यम मार्फत यी ग्राहकहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न कडा परिश्रम गर्नु पर्छ। लागत दक्षताका लागि सम्बन्धहरू प्रतिस्थापन गर्न अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले उनीहरूको ब्रान्डलाई जोखिममा छोड्दै छन् प्रतिस्पर्धीले उत्तम, सजिलो अनुप्रयोग सुरू गर्दाका लागि। अनुप्रयोगहरू एक आवश्यकता हो, तर कम्पनीहरूले उनीहरूको अनुप्रयोगका प्रयोगकर्ताहरूसँग शिक्षा, सहयोग, र प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न यसका वरिपरि अन्य प्रयासहरू तैनाथ गरिरहनु पर्छ भनेर निश्चित गर्नुपर्दछ। अनुप्रयोग पर्याप्त छैन!
Bots - यदि तपाईं एक मानवीय अन्तरक्रियाको रूपमा एक स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली भेस गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो ब्रान्ड जोखिममा राख्दै हुनुहुन्छ। लोकप्रियतामा बट्स स्काइक्रेट हुँदा, मैले तिनीहरूलाई धेरै ग्राहकहरूको लागि लागू गरें ... र छिटो पछि हटेको वा उल्लेखनीय रूपमा उनीहरूको प्रयोग परिमार्जन गरियो। समस्या यो थियो कि प्रयोगकर्ताहरूले पहिलो पटक सोचे कि तिनीहरू मानवसँग बोल्दै थिए। जब उनीहरूले त्रुटि वा गलत कदमहरू मार्फत थाहा पाए कि यो एक बोट थियो, तिनीहरू निराश थिएनन्, तिनीहरू पूर्ण क्रोधित थिए। उनीहरूले चोरेको महसुस गरे। अब, जब म ग्राहकहरुलाई बोटहरु लाई प्रयोगमा सहयोग गर्दछु, हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि ग्राहकहरु आफैंले स्वचालित सेवा गर्ने मानिससँग कुरा गरिरहेछन् भन्ने कुरालाई थाहा पाइसकेका छन् ... र हामी उनलाई तुरुन्तै वास्तविक मानवमा जानको लागि मार्ग प्रदान गर्दछौं।
इमेल - अर्को ग्राहक जसमा म काम गर्दै थिएँ उनीहरूले एउटा जटिल प्रणालीको डिजाइन र विकास गरेका थिए जहाँ उनीहरूले सूचिहरू खरीद गरे र सम्भावित ग्राहकहरूलाई हजारौं उच्च लक्षित ईमेलहरू प्रदान गरे। यसले प्रतिष्ठा प्रणालीको चारै तिर बौद्धिकताका साथ सन्देशहरू उनीहरूको भविष्यको इनबक्समा पक्का गर्दछ। जब उनीहरूले मलाई हप्तामा हजारौं सन्देशहरू पठाउँदैछन् भनेर बताउँथे, म आफ्नो मुख बन्द गर्न सक्दिन। मैले सोधें कि उनीहरूको स्प्याम प्रयासहरू कसरी गरिरहेछन्। तिनीहरू आरोपमा थोरै अप्ठ्यारो भएका थिए किनकि उनीहरूलाई प्रयासको गर्व छ… तर तिनीहरूले स्वीकार गरे कि यसले एकल नेतृत्व हासिल गरेन। मैले तिनीहरूलाई तत्कालै बन्द गर्न धक्का दिएँ र हामीले रणनीतिलाई एक उच्च लक्षित इनबाउन्ड प्रक्रियामा सार्‍यौं जुन अब योग्य लीडहरू उत्पादन गर्दै छ जुन ग्राहक यात्रामा सफलतापूर्वक सारिएको छ। आजको दिनसम्म हामीसँग थाहा छैन कि उनीहरूले कति धेरै सम्भावित ग्राहकहरू हेकलाई स्प्याम गरेर हराएका हुन सक्छन। सन्देश सस्तो छ, त्यसैले ब्रान्डहरू जहिले पनि अधिक र अधिक सन्देशहरू पठाउन प्रलोभित हुन्छन्। यद्यपि परिणामहरू प्राय: डलर र सेन्टमा महसुस हुँदैन। मैले धेरै ब्रान्डका साथ व्यापार गर्न रोकिदें जसले ह्याकलाई केवल मबाट स्प्याम गर्दछ।
कृत्रिम खुफिया - प्रत्येक मार्टेक स्ट्याकको नयाँ चाँदीको बुलेट भनेको स्वयं अनुकूलित मार्केटिंग प्रयासहरूमा मेशिन लर्निंग डिप्लोय गर्ने क्षमता हो। यो सजिलो रूपमा बेचिन्छ, तर यो सरल देखि टाढा छ। ए.आई. तैनाती गर्न डाटा वैज्ञानिकहरूको आवश्यकता छ जुन डेटाको विश्लेषण कसरी गर्ने, निर्माण गरिएको र मोडेलको परीक्षण गर्ने, चर र परिणामहरूलाई वर्गीकृत गर्ने, नेटवर्क मार्फत प्रभावकारी ढ dep्गले डिप्लोय गर्ने, गतिशील निर्णय बान्की सेट अप गर्ने र कारक हस्तक्षेपको आकलन गर्ने। नराम्रो रूपमा तैनात, एआईले तपाईंको मेसेजिंग क्षमतालाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्न सक्दछ ... वा नराम्रो… दोषपूर्ण मोडेलहरू र निर्णय रूखहरूमा आधारित स्वचालित छनौटहरू गर्नुहोस्।
गोपनीयता - डाटा प्रशस्त छ। कम्पनीहरूले खरिद गर्न र यसलाई अधिक क्याप्चर गर्दै छन् सेगमेन्टमा, निजीकृत गरिएको छ र ग्राहकहरूलाई खरीद गर्न पुश गर्दछ। मुद्दामा यो हो कि उपभोक्ताहरूले उनीहरूको डाटा क्याप्टेड, बेचे, र साझा भैरहेको देखेका छैनन्। यो खराब खेलाडीहरूले दुरुपयोग गरिरहेछन् ... र परिणाम हो यो विधान जुन संभावना मार्केटर्सको सम्भावितता र ग्राहकहरूसँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्ने क्षमतालाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍याउँछ। दायित्व ब्रान्डमा हो कि डाटालाई होशियारी प्रयोग गर्न, ग्राहकहरूसँग सम्प्रेषण गर्ने र सम्भावनाहरू यसलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, कहाँ अधिग्रहण गरिएको थियो र कसरी यसलाई मेटाउन सकिन्छ भन्ने बारे। यदि हामीले हाम्रो प्रयास पारदर्शी बनाउन मा काम गर्दैनौं भने सरकारले (र पहिले नै छ) प्रभावकारी रूपमा डेटा प्रयोग गर्ने हाम्रो क्षमतालाई नष्ट गर्दै। यदि तपाईंलाई खराब विज्ञापन अब बगैंचामा लाग्छ भने ... कम्पनीहरूले डाटामा पहुँच गर्न नसक्नेसम्म मात्र पर्खनुहोस्।
सुरक्षा - डाटाले अर्को मुद्दा प्रदान गर्दछ ... सुरक्षा। म ईन्क्रिप्ट नगरी र यसलाई उचित सुरक्षित बिना व्यक्तिगत डेटा भण्डारण गर्ने कम्पनीहरूको संख्यामा म अचम्ममा छु। मलाई यकिन छैन कि त्यहाँ धेरै धेरै कम्पनीहरू छन् र यो जोखिमलाई गम्भीरताका साथ लिइरहेका छन्, र मलाई यस्तो लाग्छ कि हामी निकट भविष्यमा ब्रान्डहरू नियामक जरिवाना र मुद्दाहरूको अन्तर्गत पतन भएको देख्दछौं। हामीले भर्खरै Equifax लाई तिनीहरूको उल्लंघन समाधान गर्नका लागि देख्यौं $ 700 लाख। तपाईं आज आफ्नो ग्राहक र ग्राहक डाटा संरक्षण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईं तेस्रो-पक्ष सुरक्षा विशेषज्ञहरू र अडिटहरूमा लगानी गर्नुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो ब्रान्ड प्रतिष्ठा र भविष्यका नाफा जोखिममा राख्दै हुनुहुन्छ। र यदि तपाईं एक स्प्रेडशिटमा पासवर्डहरू भण्डारण गर्दै हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई ईमेल मार्फत साझा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं समस्यामा पर्नुहुनेछ। पासवर्ड व्यवस्थापन प्लेटफर्म र दोहोरो प्रमाणिकरण आवाश्यक छ।
थाक - कहिलेकाहीं म सँधै हजारौंको बारेमा सुन्न सक्दछु, वा कहिलेकाँही करोडौं डलर, जुन उद्यम मार्केटि professionals पेशेवरहरूले मार्टेक स्ट्याक लगानीमा खर्च गर्छन्। यो अक्सर गरिन्छ किनभने व्यापक रूपमा स्वीकारिएको समाधानaको रूपमा देखिन्छ सुरक्षित लगानी। सबै पछि, तेस्रो-पार्टी विश्लेषक रिपोर्टहरू होशियारीका साथ मूल्या companies्कन गरियो र यी कम्पनीहरूलाई चयन गर्‍यो ... तिनीहरूलाई शीर्ष-दायाँ क्वाड्रन्टमा राख्दै। किन एउटा कम्पनीले एक प्रविधिमा लगानी गर्दैन जसले तिनीहरूको डिजिटल मार्केटिंग प्रयासहरू परिवर्तन गर्न सक्दछ? ठिकै छ, त्यहाँ धेरै कारण छन्। तपाईंसँग माइग्रेट गर्न र समाधान कार्यान्वयन गर्न संसाधन नहुन सक्छ। समाधान पूर्ण रूपमा लिवर गर्न तपाईंसँग प्रक्रियामा नहुन सक्छ। समाधान एकीकृत गर्न स्वचालित गर्न तपाईंसँग बजेट नहुन सक्छ। मैले प्रयोग गरेको सादृश्य यो हो ...
विश्व-स्तरीय उद्यम मार्टेक स्ट्याक किन्नु भनेको हवेली किन्नु जस्तै हो। तपाईं हवेली खरीद गर्नुहोस्, तर के डेलिभर गरियो काठ, पाइप, क concrete्क्रीट, पेन्ट, ढोका, विन्डोज र अरू सबै चीज तपाईंलाई आवश्यक छ। तपाईंले प्राविधिक रूपमा हवेली प्राप्त गर्नुभयो ... अब यो तपाईंको काम हो कि यसलाई कसरी बनाउने भनेर सोच्न।
डिजिटल मार्केटरहरूको रूपमा हाम्रो जडमा, हामी हाम्रो ब्रान्डको प्रतिष्ठा बढाउन, हाम्रो उद्योग भित्र हाम्रो अधिकार बढाउन, र हाम्रो ब्रान्ड र हाम्रो सम्भावनाहरू र ग्राहकहरू बीच विश्वास निर्माण गर्न कोशिस गर्दैछौं। मार्केटिंग सम्बन्धको बारेमा हो। आजको रूपमा, प्रविधि हाम्रो ब्रान्ड र हाम्रा ग्राहकहरू बीच मानव सम्बन्ध प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। भविष्यमा त्यो परिवर्तन हुन सक्दछ ... तर म विश्वास गर्दिन कि हामीले त्यो मेरो जीवनकालमा देख्नेछौं।
यो खराब टेक्नोलोजीको बारेमा पोष्ट होइन ... यो मार्केटर्सको दुरुपयोग, दुरुपयोग, वा टेक्नोलोजीको बढि बढाइका आशाहरूले कसरी तिनीहरूको ब्रांडलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बारेमा पोष्ट हो। हामी समस्या हौं, टेक्नोलोजी होइन। टेक्नोलोजी गोंद र ब्रिज हो जुन हामीले हाम्रा प्रयासहरूलाई मापन गर्न आवश्यक छ - यो प्रत्येक आधुनिक मार्केटरको लागि निरपेक्ष आवश्यकता हो। तर हामीले प्रविधिको प्रयोगमा सतर्क हुनैपर्दछ कि हामीले निर्माण गर्न कडा मेहनत गरेका सबै चीज नष्ट गर्दैनौं।